Orinasa mikraoba Microfiber, mpamatsy - Mpanamboatra hoditra vita amin'ny hoditra China
Ny anarana feno ny hoditra microfiber dia "hoditra nohamafisina microfiber". Izany dia an'ny hoditra namboarina vao namboarina tamin'ny hoditra sentetika. Anisany karazana hoditra vaovao izy io. Izy io dia misy fanoherana ny abrasion, fanoherana ny hatsiaka, fahamaivanana, fanoherana ny fahanterana ary endrika malefaka. Fiarovana ny tontolo iainana sy fisehoana tsara tarehy, io no safidy tsara indrindra hanoloana ny hoditra voajanahary (volon'ondry voalohany), ankehitriny dia orinasa maro no hivarotra hoditra microfiber ho toy ny sosona omby voalohany amin'ny vidiny lafo.
Abrasion mahatohitra mafy indrindra mikraoba vita amin'ny hoditra Microfiber PU
Ny hoditra synthetic an'ny microfiber dia manana hateviny sy voamaina isan-karazany, izay afaka mifanaraka amin'ny haingon-toerana amin'ny toerana samihafa ao anaty fiara, ary ny hoditra microfiber PU dia mahafeno ny fepetra takian'ny fiainana maintso.
Maharitra hoditra faux microfiber pu ho an'ny seza fiara
Ny fahatsapana mahazo aina, mitovy amin'ny hoditra voajanahary, mahatonga ny seza sy ny atitany ho tena ahazoana aina.
Hoditra Microfiber Green avo lenta ho an'ny fiara
Ny hoditra microfiber avo lenta dia manana fanoherana mitafy, fitaintainana, fanoherana ny fahanterana, fahalemem-panahy sy fiononana ary fahalemena mafy.
Faharetana avo lenta amin'ny hoditra microfiber mavo ho an'ny fiara mandeha
Ny hoditra microfiber dia manana ny tombony amin'ny fanoherana ny hatsiaka, ny fanoherana, ny fofonaina, ny fanoherana ny fahanterana, ny endrika malefaka, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny endrika kanto.
Hoditra mikraoba mena miady amin'ny bakteria ho an'ny atitany fiara
Ny hoditra microfiber dia mahazo aina, tsara tarehy, mafana ary miaina. Izy io dia manana diplaoma draping sy plump tsara, ary koa fanatsarana miharihary amin'ny toetra hydrophobic sy antifouling.